Pet Rescue Saga Facebook – Karịrị 10 nde mmadụ na-egwu egwu Pet Rescue Saga Facebook egwuregwu.
Pet Rescue Saga, site n'aka ndị na-eme Candy Crush Saga & Farm Heroes Saga!
Dakọtara ihe abụọ ma ọ bụ karịa nke otu agba iji kpochapụ ọkwa ahụ wee chekwaa anụ ụlọ n'aka ajọ Pet Snatchers.! Ntugharị nwere oke, yabụ hazie ha nke ọma. A ga-anwale nkà mgbaghoju anya gị site na awa nke ngọngọ busting fun ọbụna karịa Ndị aghụghọ Candy Crush!
Enweela mgbanwe na-adịghị mma nke ihe omume na-esochi nleta Puppy! Soro na iji nyere Lady Catalina aka! The Sunny Fields Villa gụnyere:
-Nwee obi ụtọ na mmemme 'Grand Piano Ballroom’ na 'Moonlight Balcony'! Site na ọkwa ọhụrụ ndị a, enwere ugbua karia 4600 ọkwa ọchị ka ị nụ ụtọ 🙂
-Ozi ndị ọzọ, ihe ịma aka, na ihe ịtụnanya!
Ugbu a, Facebook ugbu a ka bụ ikpo okwu kachasị mma enwere ike ịme ọtụtụ egwuregwu na-atọ ụtọ ozugbo.
Igwe ikpo okwu na-elekọta mmadụ anọgidewo na-azụlite site n'inye ndị ọrụ ya mmetụta dị ukwuu nke ihe egwu egwuregwu na-atọ ụtọ nwere ike ịdị.
Enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu ọhụrụ Facebook kachasị elu ịhọrọ site na, dabere na nhọrọ na uto gị.
Ka ọ bụrụ egwuregwu agha, mgbagwoju anya, egwuregwu nkịtị, egwuregwu egwuregwu, egwuregwu ime ihe, wdg, niile na-categorized na dị nnọọ mma ime gị ụbọchị.
Na ebe a, anyị ga-ekwu maka Playing Pet Rescue Saga.
Na nke a n'ogo na ị na-tasked na-eweta anọ anu ulo na ala n'ihi na anapụta na irite 20 000 ihe, ma e wezụga nke a n'ogo bụ otú tricky na ị na-isii anu ulo-arụ ọrụ na, mwute ma ezi, ị nwere ike idebe abụọ kwụsịrị onu ma ka na-eme ka ọ na-!
N'ihi ihe ụfọdụ, blocks na nke a n'ogo dị nnọọ Na tinye aka ime ka oké n'ịgwa, e nweghị firecracker na-earnt na banyere nanị ozi ọma bụ na e nweghị ịgba na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-akpali.
Metal igbe, cages na-akpọchi elu nkume tinye ntakịrị ose a ugbua na-ekpo ọkụ inweta, bọmbụ na-iko ikpe na mkpa smashing n'ihu gị nwere ike iji ha na ọ bụ ezi echiche (na-agụ dị ka 'oké echiche, naanị mee ya!') kụrie gị bombs emeghe tupu emeghị gị rocks..yeah ka m chọpụtara na-eme nke a na-ezighị ezi iji pụrụ n'ezie ebelataghị gị ọkụ!
Dobe gị metal igbe gburugburu bombs ibibi ha.
Ọ bụrụ na ị pụrụ ịgbalị-akpọkọta ndị unu metal igbe gburugburu a bọmbụ ahụ a gbajiri agbaji oghe, a ga-enyere ebibi ha n'ihi na ozugbo na ihe niile. The ụzọ ọzọ i nwere ike ibibi ha bụ ịhapụ ha na n'elu a na kọlụm na ka ha na-kụrụ aka dị ka ihuenyo akwụkwọ mpịakọta, a nwere ike ịbụ tricky ezie na dị ka e nwere nēche na-ihe ọdụ na ha dị nnọọ ka nke a bụ banyere ime…ma ọ bụ na m ikpe mgbe ọ na-eme, M ẹsịn ọtụtụ anu ulo anya na-anwa ịgafe a n'ogo!
Ma dị ka ihe niile tricky Eze egwuregwu ọ bụ ike! dị nnọọ nzube ike blocks nke na agba na họrọ gị Nkea amamihe, na-echeta ọ bụla enyo ka a pụta, figuring si ụzọ kasị mma na-emeghe elu karịa n'ịgwa bụ n'ikpeazụ isi ihe na-egwuregwu a. Na obere ndidi, a otutu chi na a ukwuu nke atụmatụ ị ga-enwe ike aku ya!
Filed Under: Ọkwa 69, Uncategorized Tagged: Enyemaka, level 69
"M anwụrụ swiiti na otutu pears gburugburu, If I wanted to rescue pets I'd head to an animal shelter" ọma na ihe m kwere m nwere ike kwuru, sị. If you've ever embarked upon a King adventure then you may have some idea what you are in … [Continue reading]
Otu n'ime ndị kasị kemfe ngwaọrụ ị nwere ohere na Pet Rescue bụ Firecracker, Ọ bụrụ na ị na-ele na ala n'aka nri nke gị na ihuenyo ị ga-ahụ a obere mita na mkpa ka ga-nri na ihe, na ibu ihe n'ịgwa ndị mma. Fill this meter by … [Continue reading]
If you've committed to the Pet rescue voyage here are a few hints, Atụmatụ na usoro iji nyere gị aka, tinyere ụzọ gị! Ọ bụrụ na ị chọrọ a obere ịhụnanya unu ga-enye a obere ịhụnanya! - Spending the time to send your friends lives every time you log in (or a … [Continue reading]
Ya mere, site ugbu a, ị nwere ike chọpụta na ọ bụghị onye ọ bụla bụ onye ofufe n'ime egwuregwu ndị a, ọma ọnwụ ha! Problem is many 'anti-gamers' enjoy a good old whinge but there are ways you can keep your appetite for lives and helping hands happily fed and the wingers … [Continue reading]
Ya mere Ọkwa 27 amalite anya ezi ezuru, albeit a little 'Matrix' with the suspended blocks. E nwere ihe ole na ole kemfe ndumodu na Atụmatụ maka na-ebe a na ogbo na ezi ọgụgụ nke napụtara anu ulo na a ezigbo ọnụ ọgụgụ nke kpakpando buut! First … [Continue reading]
Oh m, a ụtọ nta game enwetatụbeghị kama akpali n'oge na-adịbeghị! Gịnị obi ọjọọ n'obi ime Eze Mmepe na na-echere ihe ndị a ogbenye nzukọ anu ulo esote? Ọkwa 59 bụ ihe dị ọcha na-achọ larịị, the pets actually get a break on this one as … [Continue reading]
Filed Under: Ọkwa 59 Tagged: ike, Ọkwa 59
Ọfọn ikpe ikpe site ikpo nke enyi m dinaa n'elu larịị 29 marker I'm going to make a judgement call and say its a tricky one. Na ebumnobi nke imezi 99% nke nkanka na ịkpata 16 000 points I'm having flashbacks and remembering … [Continue reading]
Now don't freak out! Ọkwa 43 Anya na-eyi egwu ma ya niile bluff, gị obere fishies ga-adị mma tupu ị maara ya! The abụọ mere ebe a na-na-azọpụta anọ anu ulo (azụ ndị niile ị ga-esi) na irite a nke kacha nta nke 24 000 ihe, peice nke achicha! … [Continue reading]
Filed Under: Ọkwa 43 Tagged: Firecracker, Ọkwa 43